Vista's Colorful Planet: October 2009
Labels: funny5comments | Links to this post
Labels: Miscellaneous9comments | Links to this post
1. What is your name : Vista
2. A four Letter Word : View
3. A boy's Name : Victor
4. A girl's Name : Valina
5. An occupation : Vascular Surgeon
6. A color : Violet Red
7. Something you'll wear : V-neck sweater
8. A food : Vanilla Ice Cream
9. Something found in the bathroom : Vase
10. A place : Venice
11. A reason for being late : Very Very tired :P
12. Something you'd shout : Voila !
13. A movie title : V for Vendetta ( my fav )
14. Something you drink : Vodka Martini
15. A musical group : Velvet Underground
16. An animal : Viper
17. A street name : Vista Terrace ( Singapore )
18. A type of car : Volvo
19. The title ofasong : Vacacion by Nelly Furtado
20. A verb : Value
(avocado: tag ချင်တယ် V for Vista ရေးပေးပါ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ခ်မရှိလို့ စီဘုံးမှာတဂ်ပါတယ် ရေးပေးပါ ချစ်ရင် --- ဆိုတဲ့ထောထောရယ် ၊ V for Vista ရေးပြီးရင်လက်တို့ ပါဆိုတဲ့ ဗီလိန် ရယ် အတွက် ရေးပြီးပါကြောင်း ...)
Labels: funny 11 comments | Links to this post
Labels: About me 8 comments | Links to this post
Labels: About me 18 comments | Links to this post
သီတင်းကျွတ်လပြည့် (အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့) အတွက်ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဓာဓိက၏ စိတ်အားဖြည့်ဓမ္မအတွေးလေးတွေကိုမျှဝေပေးတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် forward လုပ်ပေးတဲ့ email ထဲကရတာပါ။ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဓာဓိက ရဲ့အမှာစကားလေးတွေကို ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်လို့ ပါ ။
ကျေးဇူးသိစိတ်မြင့်မားသူတိုင်း သိစိတ်ကျေးဇူးဖြင့် တုံ့ ပြန်ကြသည်
စိတ်မထားတတ်တဲ့ မိဘ စိတ်ထားတတ်အောင် ၊
ကုသိုလ်နည်းပါးတဲ့ မိဘ ကုသိုလ်တိုးပွားအောင် ၊
ကူညီ ပံ့ပိုးပေးတာကို ဓမ္မနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
မိဘရဲ စိတ်ဓာတ် မြင့်မားရေးအတွက်
စိတ်အာဟာရတွေနဲ့ကျေးဇူးဆပ်တာမို့ 
စ်ိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျေးဇူးဆပ်နည်း လို့ 
မိဘရဲ့ စိတ်ဓာတ်မြင့်မားမှုနဲ့ကုသိုလ်တိုးပွားမှုက
ဘ၀လွတ်မြောက်မှု အဆင့်အထိ တတ်လှမ်းသွားနိုင်ပြီဆိုရင်
ဓမ္မနည်းနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်တဲ့ သားသမီးအနေနဲ့ 
မိဘကျေးဇူးကို အကျေဆပ်ပြီးသား ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ ။
ကိုယ်အလုပ်၊ နှုတ်အလုပ်၊ စိတ်အလုပ်ရယ်လို့ 
အလုပ်သုံးမျိုးပဲ ရှိပါတယ် ။
အဲဒီအလုပ်သုံးမျိုး လုပ်တိုင်း လုပ်တိုင်း
အလုပ်တိုင်းမှာ တွဲပါနေတဲ့ အဲဒီစေတနာဓာတ်လေးကို
ကံ လို့ ခေါ်ပါတယ် ။
ကံဆိုးရင်တော့ အကျိုးပေး ညံ့ပါတယ် ..။
သူ့ အနာဖျောက်ရင် ကိုယ့်အနာပျောက်တယ်
ဘ၀ရဲ့ နာရေး ဒုက္ခ အမျိုးမျိုးမှ
စီးပွားဥစ္စာ မပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀နာရေး၊
ကျန်းမာရေး ညံ့ဖျင်းတဲ့ ဘ၀နာရေး၊
ချို့ တဲ့တဲ့ ဘ၀နာရေး၊
အစရှိတဲ့ ဘ၀ရဲ့ နာရေးဒုက္ခ အမျိုးမျိုးဟာ
နာရေးကူညီသူ ကုသိုလ်ရှင်ရဲ့ ဘ၀ထံပါးမှာ
ပိန်းကြာရွက်တွင် ရေမတင်လျှောကျသကဲ့သို့ 
မကျမရောက်ပဲရှိမှာ သေချာပါတယ် …။
စိတ်ချမ်းသာအောင် ဖန်တီးမပေးနိုင်ဘူး ..။
ဒါကြောင့် မိမိရော၊ မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်ပါ
စိတ်ချမ်းသာမှု အမြဲ ရှိစေဖို့ အတွက်
ကြိုးစားဖို့ လိုအပ်လှပါတယ် ..။
အရာရာကို ယောနိသောမနသိကာရ ထားလိုက်ယုံပါပဲ ။
စိတ်ထားတတ်ရင် စိတ်ကျန်းမာပါတယ် ။
ကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ ပဲ တွေ့ တွေ့ ၊
ဆိုးတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပဲ တွေ့ တွေ့ ၊
တွေ့ သမျှ အခြေအနေထဲက ကောင်းတဲ့အချက်ကို
မရရအောင် ရှာကြံတွေ့ ပြီး
စိတ်ထားတတ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ် ။
စိတ်ချမ်းသာစရာနဲ့တွေ့ နေတာတောင်မှ
စိတ်ဆင်းရဲ နေတတ်ပါတယ် …။
အကျွမ်းဝင်သူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
အကျွမ်းဝင်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာပါ ။
ပိုပြီးဂရုတစိုက်ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
အရာရာ အဆင်ပြေချင်ရင် အရာရာတိုင်းမှာ သဒ္ဓါတရားရှိပါ
စားဝတ်နေရေးနဲ့ ပတ်သတ်လို့ 
ဒါနကောင်းမှုမှာ သဒ္ဓါတရားအားကောင်းရပါမယ် ..။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သတ်လို့ 
သီလကောင်းမှုမှာ သဒ္ဓါတရားအားကောင်းရပါမယ် ..။
သမထကောင်းမှုမှာ သဒ္ဓါတရားအားကောင်းရပါမယ် ..။
၀ိပဿနာကောင်းမှုမှာ သဒ္ဓါတရားအားကောင်းရပါမယ် ..။
အာရုံတိုင်းဟာ ကုသိုလ်အာရုံတွေ ချည်းပါ ..။
နေရာတိုင်းဟာ ကုသိုလ်နေရာတွေ ချည်းပါ..။
အလုပ်တိုင်းဟာ ကုသိုလ်အလုပ်တွေချည်းပါ ..။
အချိန်တိုင်းဟာ ကုသိုလ်အချိန်တွေ ချည်းပါ ..။
သဘာဝ အခွင့်အရေးတွေပါပဲ …။
ကုသိုလ်ကံကောင်းရှိလို့ ပါ ။
ဘ၀ကောင်းကို လုံးဝမရနိုင်ပါဘူး ။
စိတ်လိုလက်ရ ပြုလုပ်အားထုတ်မှ ရှိနိုင်ပါတယ် ။
စိတ်လိုလက်ရ ပြုလုပ်အားထုတ်ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာကလည်း
စိတ်လိုလက်ရ ပြုလုပ်အားထုတ်သင့်တယ်လို့ 
အသိဥာဏ်ရှိမှ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ..။
တရားအလှူ ( ဓမ္မဒါန ) ကသာ
မှုရင်းက www.newworldnanda.ning.com မှလို့ သိရပါတယ် ။
ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူး Rack က Power Switch မကောင်းချင်တော့လို့ လဲတာ
လဲမှာက ကိုယ်တို့ Sub comp က Engineer ရယ် Technician ရယ်လာလဲမှာ
ကိုယ်ကသွားပြီး အဲဒီ Rack မှာရှိတဲ့ Sever, other System တွေ Shutdown လုပ်ပေးရမယ်
ဘယ်တော့မှ မ down တဲ့ machine တွေမိုလို့ ညဘက်မှာပဲ down ရတယ်
၂ရက်လောက်တည်းက တစ်ရုံးလုံးကိုလည်းကြိုပြောထားရသေးတယ် ..
အင်း ..သူတို့ ကတော့လဲပြီးပြန်သွားမှာ…
သူတို့ ပြန်တာနဲ့ ကိုယ့်ကောင်တွေအကုန်ပြန် on ရမှာ
ဘယ်တော့မှ Shutdown မလုပ်တဲ့ကောင်တွေဆိုတည်းက
down ရတာမလွယ်လို့ ပေါ့နော်
အခုတော့သူတို့ တွေ change ဖို့ လုပ်နေတုံးကိုယ်ကစောင့်နေရတာမို့ တင်လိုက်တာပါ
Fort Minor ကြည့်ရင်း စောင့်နေလိုက်ပါတယ် …
ဒီည၁ နာရီလောက်တော့ပြီးကောင်းပါရဲ့ …
Petrified-Fort Minor Video - Fort Minor Music Videos
Labels: About me5comments | Links to this post
Labels: Plants 8 comments | Links to this post